Anyị na-ewepụ njehie msidcrl40.dll
Nsogbu ndị a na-agụnye ọbá akwụkwọ msgstrcrl40.dll na-adabere na ntinye ekwesighi nke egwuregwu ahụ nke ejikọtara faịlụ a. Ọtụtụ mgbe, ọdịda na-apụta mgbe ị na-anwa ịgba ọsọ GTA 4 ma ọ bụ Fallout 3 na nsụgharị Windows nile nke egwuregwu ndị a na-akwado. Ụzọ iji dozie nsogbu na msidcrl40.dll Ụzọ kachasị esi mee ka obi sie gị ike na nsogbu dị na ya bụ iji dozie egwuregwu ahụ site na ihicha ndekọ ahụ ma gbakwunye msidcrl40.
Anyị na-ewepu njehie na d3drm.dll
The library d3drm.dll bụ otu n'ime components nke ngwa DirectX nke a chọrọ iji na-agba ọsọ ụfọdụ egwuregwu. Mmehie kachasị na-apụta na Windows 7, mgbe ị na-agbalị ịnwa egwuregwu nke ntọhapụ 2003-2008 site na iji Direct3D. Ihe ngwọta ga-enyere gị aka maka nsogbu d3drm.dll Ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu dị n'ọbá akwụkwọ a bụ iji wụnye mbipute nke Direct X: faịlụ ahụ ị na-achọ na-ekesa dịka akụkụ nke nkesa nkesa maka mpaghara a.
Nchọpụta nsogbu nke ọbá akwụkwọ XINPUT1_3.dll
Ejikọta XINPUT1_3.dll faịlụ na DirectX. Ọbá akwụkwọ ahụ bụ maka ịbanye ozi site na ngwaọrụ ndị dịka keyboard, mgbagwoju anya, ọṅụ, na ndị ọzọ, yana ịkekọrịta na nhazi nke ọdịyo na ihe nkiri na egwuregwu kọmputa. Ọ na-emekarị na mgbe ị na-agbalị ịmalite egwuregwu, ozi na-egosi na XINPUT1_3.
Mgbe ị wụnye ihe omume ma ọ bụ egwuregwu dịgasị iche iche, ị nwere ike ịchọta ọnọdụ ebe mgbe ị gbanwere, njehie "Ịmalite mmemme ahụ enweghị ike ịrụ, n'ihi na DLL achọrọ adịghị n'ime usoro." N'agbanyeghị eziokwu na usoro Windows na-edekarị akwụkwọ ọdebe na ndabere, mgbe ị budata ma tinye faịlụ DLL n'ebe kwesịrị ekwesị, njehie ka na-apụta, usoro ahụ adịghịkwa ahụ ya.
Dezie njehie d3dx9_43.dll
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-agbanye egwuregwu dị iche iche ma ọ bụ ngwanrọ, windo nwere ike ịpụta na - "Error, missing d3dx9_43.dll". Nke a pụtara na usoro gị anaghị enwe ọbá akwụkwọ a ma ọ bụ mebie ya. Ọtụtụ mgbe nke a na-eme n'egwuregwu, dịka ọmụmaatụ, World of Tanks nwere ike ịchọ DLL a, ma mgbe ụfọdụ, ọ ga-ejikwa ihe omume ndị na-arụ ọrụ na eserese 3D mee ihe.
Dozie nsogbu amtlib.dll
Ọbá akwụkwọ a na-akpọ amtlib.dll bụ otu n'ime ihe Adobe Photoshop, na njehie faịlụ a gosipụtara mgbe ị na-agbalị ịmalite Photoshop. Ihe kpatara ya bụ mbibi ụlọ akwụkwọ n'ihi arụmọrụ antivirus ma ọ bụ ọdịda software. Ihe ngosipụta kachasị mma nke nsogbu maka nsụgharị Windows ugbu a, malite na Windows 7.
Nchọpụta nsogbu tier0.dll
Ọtụtụ mgbe, Mbibi-agha: Ndị na-egwu egwu ụwa na-enwe nsogbu na ụdị njehie, ebe ọmarịcha ọbá akwụkwọ a na-akpọ tier0.dll na-egosi. Ọ na-apụta na nsụgharị Windows nile nke egwuregwu a na-akwado. Otu esi wepu njehie tier0.dll Ka anyị mee ndoputa ozugbo - enweghi ngwọta dị irè maka nsogbu a: usoro ngwanrọ na-enyere onye aka, ọbụnadị imelite nghazi nghazi kọmputa agaghị enyere onye ọ bụla aka.
Gbanye ebe obibi akwukwo rld.dll
Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịmalite Sims 4, FIFA 13 ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, Crysis 3, ị na-enweta ozi usoro na-agwa gị maka njehie na-edekọ faịlụ rld.dll, ọ pụtara na ọ naghị adị na kọmputa ma ọ bụ nke nje kpatara ya. Njehie a bụ ihe nkịtị ma enwere ọtụtụ ụzọ isi dozie ya.
Idozi njehie na vorbis.dll ọbá akwụkwọ
Mgbe na-agbalị ịmepụta otu n'ime GTA kacha ewu ewu: egwuregwu San Andreas, onye ọrụ nwere ike ịhụ njehie usoro. Ọtụtụ mgbe, ọ na-egosi: "Ịmepụta usoro ihe omume ahụ agaghị ekwe omume n'ihi na kọmputa enweghị vorbis.dll. Gbalịa ịtinye ihe omume ahụ." Ọ na-eme maka ihe kpatara na PC enweghị ụlọ akwụkwọ vorbis.
Ọtụtụ mgbe enwere njehie dika "File dxgi.dll achọta". Ihe kpatara na njehie nke njehie a dabeere na sistemụ sistemụ arụnyere na kọmputa. Ọ bụrụ na ị hụ ozi yiri na Windows XP - ma eleghị anya, ị na-agbalị ịmalite egwuregwu na-achọ DirectX 11, nke anaghị akwado OS a.
Nsogbu na-edozi ya na vog.dll di omimi
Otu ọbá akwụkwọ gbara ọkpụrụkpụ na-akpọ vog.dll na-ezo aka na MTA mgbanwe faịlụ maka Ukwu Izu Nchekwa onwe: San Andreas egwuregwu. Ọtụtụ mgbe, ịnwa ịmalite egwuregwu na nke a na-eduga ná njehie, ebe ụlọ ọrụ ahụ awụnyere na-egosi. Enweghi ike igosi na nsụgharị Windows niile nke GTA na-akwado: SA.
Dozie nsogbu na enweghị zlib1.dll
Akụkụ a bụ mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ "Linux Format" ma kwadoro ka ọ rụọ ọrụ na ebe nchekwa dị iche iche nke nwere ebe nchekwa nke ngwaọrụ dị iche iche. N'ihi ya, a na-echekwa ozi na ụdị mpempe akwụkwọ. Ọtụtụ mgbe, a na-eji zlib1.dll mee ihe na ndị ọrụ Sega, Sony ma ọ bụ Nintendo egwuregwu consoles. Mgbe akwukwo a na efu, ozi ezighi ezi na-egosi na ihuenyo.
Dezie njehie core.dll
Ozi dị ka "Ịmepụta ihe omume ahụ agaghị ekwe omume n'ihi na kọmputa ahụ enweghị core.dll" nwere ike nweta site n'ịgbalị ịmalite ụdị egwuregwu dị iche iche. Fichụ a kapịrị ọnụ nwere ike ịnweta ụdị dị iche iche dị iche iche, dịka ihe egwuregwu egwuregwu (Lineage 2, Counter-Strike 1.6, egwuregwu na ezinụlọ Ezighị ezi nke engines) ma ọ bụ ngwa DirectX arụnyere site na nkesa na-esiteghị.
Idozi njehie na akwụkwọ ntụpọ lame_enc.dll
A na-eji Lame_enc.dll, nke a makwaara dị ka ngwugwu Encoder, iji gbanwee faịlụ ọdịyo n'ime MP3 usoro. Karịsịa, ụdị ọrụ a na-ekwu na Audacity music editọ. Mgbe ị na-agbalị ịzọpụta ọrụ na MP3, ị nwere ike ịnweta njehie sl_enc.dll. Ihe faịlụ ahụ nwere ike ịnọghị na ya n'ihi nsogbu usoro, nje virus ma ọ bụ na agaghị etinye ya na usoro ahụ.
Idozi nsogbu ahụ na njehie na mfc100u.dll
N'ịgbalị ịga ọsọ, dịka ọmụmaatụ, Adobe Photoshop CS6 ma ọ bụ otu n'ime ọtụtụ mmemme na egwuregwu site na iji Microsoft Visual C ++ 2012, ị nwere ike ịhụ njehie na-ezo aka faịlụ mfc100u.dll. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nke Windows nwere ike ịhụ ọdịda dị otú a. N'okpuru, anyị ga-akọwa otu esi edozi nsogbu a.
D3D11.dll njehie ndozi
D3D11.dll bụ akụkụ nke DirectX API maka Windows 7, 8, 10. Ọ bụ ọrụ maka igosipụta ihe oyiyi atọ n'ime ngwa egwuregwu. Mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na mgbe ị na - agba mbọ ịgba ọsọ na ngwanrọ kwesịrị ekwesị, usoro ahụ gosipụtara njehie nke enweghị D3D11.dll. Nke a nwere ike ịdaba [jlbnm n'ihi mbupu nke antivirus, mgbanwe site na onye nhazi mgbe echichi ma ọ bụ usoro dị mfe usoro.
Ihe omuma nke nxcooking.dll bu ihe omuma nke technology nke PhysX, nke ejiji dika ugbua maka mmepe akwukwo uzo di iche iche n'egwuregwu di iche iche. Nsogbu nke faịlụ ahụ na-akpata bụ isi n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi ma ọ bụ egwuregwu n'onwe ya, nakwa dị ka mbibi nke ụlọ akwụkwọ.
Nchọpụta nsogbu nke ọbá akwụkwọ 3DMGAME.dll
3DMGAME.dll bụ ebe obibi akwụkwọ njikọ dị ike nke bụ akụkụ Microsoft Visual C ++. Ọ na-eji ọtụtụ egwuregwu na mmemme nke oge a mee ihe: PES 2016, GTA 5, Far Cry 4, Sims 4, Arma 3, Agha 4, Watch Dogs, Dragon Age: Inquisition na ndị ọzọ. Ngwa ndị a niile agaghị enwe ike ịmalite ma usoro ahụ ga - enye njehie ma ọ bụrụ na kọmputa ahụ enweghị faịlụ 3dmgame.
Idozi nsogbu na window.dll
Ejikọtara window.dll faịlụ ahụ na egwuregwu nke usoro ihe omume Harry Potter na Rayman, yana egwuregwu Postal 2 na addons. Njehie na ọbá akwụkwọ a gosiri enweghị ike ma ọ bụ mmebi n'ihi omume nke nje ma ọ bụ nrụnye na-ezighị ezi. Enweghị ike na-egosi na nsụgharị niile nke Windows, malite na 98. Nhọrọ maka idozi nsogbu na windo.
Idozi njehie na faịlụ api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwa ịmepụta usoro ihe omume ma ọ bụ egwuregwu ga-ejedebe na ozi njehie na faịlụ api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Ọbá akwụkwọ a dị omimi bụ Microsoft Visual C ++ 2015, ọ dịkwa mkpa ka ọ bụrụ ihe kachasị mkpa n'oge a. Njehie a na-egosipụtakarị na Windows Vista - 8.
https://termotools.com ig.termotools.com © Dll 2020